DOWNLOAD HD Jetway sy seranam-piaramanidina FSX & P3D
HD Jetway sy Parking eo an-toerana FSX & P3D HOT
Ity misy fanovana ny toeram textures ambony famaritana, dia manampy toerana ny menaka sy ny solika teo amin'ny tany, ary amin'ny ankapobeny manao ny seranam-piaramanidina nitoto zava-misy kokoa.
HD textures hanoloana ny tany am-boalohany nandritra ny fametrahana mihasimba. Nandritra uninstallation ny installer hampodiko ny antontan-taratasy tany am-boalohany, ianao dia tsy misy ho manao ny zavatra rehetra dia mandeha ho azy ny Rikoooo!
Mba hahitana ny famaritana feno ny famaritana feno ao anatiny FSX (na Prepar3D), mila manova ny anao ianao fsx.cfg (Prepar3D.cfg) famoahana ary hanova ny fidirana:
Raha tsy misy ny fidirana dia apetraho eo ambony ary apetaho eo ambanin'ny fizarana [GRAPHICS] ao amin'ny fsx.cfg file. Ohatra eto ambany:
Mihasimba kalitao ihany koa miankina amin'ny fahaizana ny sary karatra, ny vokatra mety ho samy hafa amin'ny olona iray hafa. Na izany aza, dia nanoro hevitra ny mampiasa avo fampisehoana sary karatra ho an'ny lalao.
10.1 + installer fametahana miaraka amin'ny FSX etona, Prepar3D v1-2-3
Nohavaozina taminy 22-01-2017
Tim Fuchs Real Tontolo_iainana Xtreme, Inc.